Media advisory: First ever signing ofaJoint Action Plan between the UN CTFMR and an Ethnic Armed Organization, the Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), to end and prevent the recruitment and use of children | United Nations in Myanmar
Media advisory: First ever signing ofaJoint Action Plan between the UN CTFMR and an Ethnic Armed Organization, the Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), to end and prevent the recruitment and use of children
Scroll down for Myanmar version
WHAT: Virtual signing ceremony ofabilateral joint action plan (JAP) between the UN Country Task Force of Monitoring and Reporting (CTFMR) on grave violations against children in Myanmar and an Ethnic Armed Organisation, the Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) to end and prevent the recruitment and use of children.
WHO: Co-chairs of the CTFMR, UN Resident and Humanitarian Coordinator, Ola Almgren UNICEF Representative to Myanmar, June Kunugi, and General Saw Mu Shay of the DKBA will sign the joint action plan witnessed by the Special Representative of the UN Secretary-General on Children and Armed Conflict, Virginia Gamba. The virtual event will also be attended by the Chairman of the Peace Commission of the National Reconciliation and Peace Centre, Dr Tin Myo Win, diplomatic corps and UN agencies.
WHEN: 09.00am -10.00am (GMT+6:30) Friday 20 November 2020.
WHERE: The signing ceremony will take place virtually. Video recording of the event andapress release will be shared with media after the event.
WHY: The JAP is aimed at preventing the recruitment and use of children, for which the DKBA has been listed in the UN Secretary-General’s Annual Report on Children and Armed Conflict AAC since 2013. However, the JAP will also seek to sustainably prevent all grave violations more broadly. It is hoped that this ground-breaking event will set an important precedent, encouraging broader engagement of ethnic armed groups and signature and implementation of further JAPs with the other Ethnic Armed Organizations also listed in the annexes of the Secretary-General's Annual Report on Children and Armed Conflict.
Report of the UN Secretary-General on Children and Armed Conflict (2020) https://bit.ly/2UDB1FB
Video of the Open Debate of UN Security Council on Children and Armed Conflict https://bit.ly/3pBqXuS
Aye Win, National Information Officer, UNIC, email: wina@un.org
Htet Htet Oo, Communication Officer, UNICEF Myanmar, email: hoo@unicef.org
မီဒီယာကြေငြာချက် - ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်တားဆီးရန် ကုလသမဂ္ဂ CTFMR နှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (DKBA) တို့အကြားပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကို ပထမဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။
အကြောင်းအရာ - ကလေးစစ်သားများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးပါရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိကလေးများကို ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်မှုများအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးအင်အားစု(CTFMR)နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (DKBA) ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ် (JAP) ၏ အွန်လိုင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနား
တက်ရောက်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ - CTFMR ၏တွဲဖက်ဥက္ကဌများ၊ ကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး Ola Almgren၊ ယူနီဆက်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေကိုယ်စားလှယ် June Kunugi နှင့် DKBA မှ ဗိုလ်ချုပ်စောမူရှေး တို့သည် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးများနှင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Virginia Gambaမှ မျက်မြင်သက်သေအဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြမည်။ ဤအခမ်းအနားကို အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း၊ သံတမန်ရေးရာအဖွဲ့များနှင့် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများလည်းတက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
အချိန်- ၉နာရီ ၁၀နာရီ (GMT + 6:30) သောကြာနေ့ နိုဝင်ဘာ၂၀၊ ၂၀၂၀။
နေရာ- လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အခမ်းအနား၏ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို အခမ်းအနားပြီးနောက်မီဒီယာနှင့်မျှဝေမည်။
အကြောင်းပြချက်- JAPသည် DKBA၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ကလေးများနှင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ (AAC) ဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာစာရင်းဝင်ထားရသော အကြောင်းဖြစ်သည့် ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကို တားဆီးဖို့ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အပြင် JAP သည် ပြင်းထန်သောချိုးဖောက်မှုများအားလုံးကို ရေရှည်တည်တံ့၊ကျယ်ပြန့်စွာတားဆီးဖို့ ကြိုးပမ်းပါမည်။ ဤဆန်းသစ်သောအခမ်းအနားသည် အရေးကြီးသောထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောထိတွေ့ဆက်ဆံဆွေးနွေးမှုတွေကို အားပေးခြင်းနှင့်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးများနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဍိပက္ခဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၏ နောက်တွဲများတွင်ဖော်ပြထားသည့် အခြားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် JAP များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထွေအထွေကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အစီရင်ခံစာ https://bit.ly/2UDB1FB
ကလေးသူငယ်များနှင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု ဗီဒီယို (၂၀၂၀) https://bit.ly/3pBqXuS